नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४५ पुग्यो,निको हुनेको सख्या भने ७
By administrator on	 April 22, 2020 देश, विविध खबर, स्थानीय, स्थानीय तह
१० बैशाख । नेपालमा कोरोनाभाइरस कोभिड १९ संक्रमितको संख्या ४५ पुगेको छ । आज उदयपुरबाट लगिएको स्वाव धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ‘पीसीआर’ नमुनामध्ये तीनजनामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै संक्रमितको संख्या ४५ पुगेको हो । थपिएकाहरु तीनैजना पुरुष हुन् । २४ वर्षीय, ६० वर्षीय र ७२ वर्षीय पुरुष संक्रमित भएका हुन् । संक्रमित सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
पुष्टि भएका तीनमध्ये एकजना भारतीय नागरिक रहेको खुलेको छ । प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार २४ वर्षिय भारतीय नागरिक दिल्लीका वासिन्दा हुन् । अन्य दुई ६० र ७२ वर्षियको ठेगाना विराटनगर उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, अहिलेसम्म सातजना उपचारपछि निको भइ घर फर्केका छन् ।
बुधबार टेकु अस्पतालबाट धादिङका ३२ वर्षीय पुरुष र सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट ४० वर्षीय पुरुष गरी दुईजना ‘डिस्चार्ज’ हुनुभएको छ । यद्यपी ढिला भएको खवरले धादिङबाट आफन्त भोलि मात्रै अस्पताल पुग्ने अस्पतालले जनाएको छ । बुधबार डिस्चार्ज हुनेमा कञ्चनपुरका बेदकोट नगरपालिका–१० घर भएका ४० बर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ ।
चैत १३ गते उत्तराखण्डबाट फर्किएका उहालाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि चैत २२ गते सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । यसअघि पाँच जना संक्रमित रहेको सुदूरपश्चिममा उनी सहित तीन जना निको भएर घर फर्किपछि अब कैलालीकै दुईजना महिला मात्रै उपचाररत छन् । उहाँहरुको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य रहेको चिकिस्तकहरुले जनाएका छन् ।
मंगलबार सेती अस्पतालबाटै २७ वर्षीय एक युवक डिस्चार्ज हुनु भएको थियो । अहिलेसम्म पीसीआरबाट ९ हजार ११ जनालाई परीक्षण गरिएको डा. देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, ‘आरडीटी’बाट ३१ हजार ४२० गरी जम्मा परीक्षणको संख्या ४० हजार ४३१ पुगेको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घन्टामा तीन हजार ७३६ ओटा परीक्षण गरिएको पनि बताएको छ । ८ हजार ५९५ जना ‘क्वारेन्टाइन’मा रहेको बताउँदै डा देवकोटाले काठमाडौंमा तीनसहित ९५ जना क्वारेन्टाइनमा बसेको जानकारी दिनुभयो । हाल २६९ जना ‘रेड जोन’मा परेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले १८ प्रकारका औषधि २३ टन भारतबाट प्राप्त गरेको र चीनबाट पीसीआर मेसिन दुईओटासहितका स्वास्थ्य सामग्री तातोपानीबाट ल्याउँदै गरेको पनि बताएको छ ।